Muxuu ahaa Mashruuca Xarunta Saadka ee Malatya? | RayHaber | raillynews
HometareenkaMashruuca Malatya Logistics Center Maxaa Dhacay?
26 / 10 / 2017 tareenka, GUUD, Xarumaha Saadka, TURKEY
22 Axadii, xafladdii furitaanka ee xarunta loo yaqaan 'Kahramanmaraş Logistics Center' ayaa lagu qabtay Kahramanmaraş iyadoo xaflad ay ka soo qeyb galeen Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Ahmet Arslan. Munaasabaddan ayaa waxay maskaxda ku soo dhigeysay Shirkii Saadka ee Caqliga Maskaxda ee lagu qabtay Malatya bilowga sanadkan. Kulankaas, ayaa lagu falanqeeyey habka diyaarinta suurta galnimada xarunta logistics ee qorshuhu ahaa in la dhiso iyo tabarucaadka Malatya ku bixin doonto wax soo saarka iyo awooda dhoofinta. Ka waran mashruuca Xarunta Saadka? Dadweynuhu waxay jecelyihiin jawaabta su'aashan.
Shirka Wadajirka ee 2017 Xarunta Wadajirka Maskaxda ee Mal ayaa lagu qabtay Malatya bishii Febraayo. Shirka ka hor, kulan qiimayn ah ayaa lagu qabtay dhamaadka 2016 ee aasaaska Malatya Logistics Center oo ay martigelisay Hay'adda Horumarinta Fırat.
La Yaab Dadweynaha
Kulamada, shirarka iyo aqoon isweydaarsiga; Habka suurtagalka diyaarinta xarunta saadka ayaa loo qorsheeyay in laga dhex sameeyo Malatya iyo tabarucaadka ay gobolku ku deeqi doonto wax soo saar iyo dhoofinta suurtagalnimada. Ka waran mashruuca Xarunta Saadka? Dadweynuhu waxay jecelyihiin jawaabta su'aashan. Dadweynuhu waxay aaminsan yihiin in xarunta lojistikada ee la qorsheeyay in laga dhiso Malatya, oo timaado meel cayiman oo warshadaha ah, ay gacan ka geysan doonto magaalada si kasta oo ay tahay. Warshadaha ayaa sidoo kale qaba in sameynta xarun logistics ay saameyn weyn ku yeelan doonto ciribtirka arrimaha u muuqda kuwa aan faa'iido u laheyn badeecooyinka ay soo saaraan si ay u gaaraan suuqa.
MA QAARAA MADAXWEYNAHA?
Wakiilo ka socda ururada aan dowliga ahayn ee aan ka helnay fikradooda, ayagoo sheegaya in Malatya ay tahay meel ku habboon abuuritaanka xarun saadka marka laga hadlayo bixinta kaabayaasha si loo gaaro dekedaha, wadamada kale iyo gobolada leh awooda wax soo saarka ee Malatya, oo ku taal xarun juquraafi ahaan muhiim u ah iyo gobolada ku xeeran. Gaar ahaan, Malatya hay'adda ugu weyn uguna muhiimsan ee ururka aan dawliga ahayn Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (TSO) 'in arrintan ay la yaabban tahay in la raaco iyo in kale. TSO, oo ujeeddadeedu tahay hanti waa horumarka iyo kobcinta warshadaha iyo dhaqaalaha magaalada, waxaa la filayaa inuu safka hore kaga jiro isbeddelka jirka ku ridi doona dhagaxa hoostiisa, maahan gacanta.
U BAAHAN TAHAY IN LAGU SAMEEYO FARSAMADA
Iyadoo la tixgalinayo maalgashiga lagu sameyn doono gobolada bari iyo koonfur bari sanadaha soosocda iyadoo lagala wareegayo Mashruuca Xarunta Soojiidashada, mashruuca xarunta saadka ee la qorsheeyay in laga dhiso Malatya wuxuu ubaahanyahay in si dhaqso ah loo dhaqan galiyo. Sababtoo ah dhammaan dhaqdhaqaaqa gobolka ee arrintan la xiriira si loo ilaaliyo arrinta, Kastamka iyo Wasiirka Ganacsiga Malatya Kuxigeenka Bülent Tüfenkci'nin waa inay ku xoojiso gacantiisa.
EVEN KAHRAMANMARAŞ FURAN
Mid ka mid ah arrimaha aadka loogu dhaleeceeyo Malatya; ka wada hadalka iyo ka wada hadalka mashruuca la soo jeediyay; hase yeeshe, waa in yar oo ka soo daahid fulinta. Waxaa laga baqayaa in mashruuca Xarunta Saadka sidoo kale uu dhaliyo jahwareer. Dhanka kale, iyadoo aqoon isweydaarsiyo iyo shirar lagu qabtay Malatya, waxaa la arkay in aasaaska mashruucan lagu dejiyay Kahramanmaraş, taas oo ah mida saxda ah ta xigta. 22 Oktoobar 2017 Axadii, xafladda furitaanka Xarunta Saadka ee Kahramanmaraş waxaa lagu qabtay xaflad ay ka soo qeyb galeen Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Ahmet Arslan.
Isha: waxaan www.vuslathaber.co
Agbaba waxay doonaysay xarun agab oo ku taal Malatya
Mashruuca Nidaamka Tareenka Fudud ee İzmir ee Evka 3 - Saldhigga Dhexe ee Bornova
Xarunta Soodhaweynta Shirka Wadajirka Mindhiga
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Malatya